အဇစ် ဇက်ခနို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
အဇစ် ဇာခနို့ (၁၉၆၁ ဘွား) သည် မော်ရိုကိုနိုင်ငံသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုမှစ၍ နိုင်ငံရေးလောကသို့ဝင်သည်။ အက္ကဝါလုပ်ငန်းစု၏ အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုမှ ၂၀၂၁ ခုအထိ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။  ၂၀၂၁ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်တွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာ၏။ 
၃ နိုင်ငံရေးလောကသို့ ရောက်လာခြင်း
၁၉၈၆ ခုတွင် ရှားဘရွတ်တက္ကသိုလ် (Université de Sherbrooke) မှ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဖြင့် ဒီပလိုမာဘွဲ့ ရသည်။ 
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သော အက္ကဝါလုပ်ငန်းစု၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ ဖော်ဘီမဂ္ဂဇင်းက ၂၀၁၃ ခု၊ နိုဝင်ဘာလတွင် အက်ခနို့၌ ဒေါ်လာ ၁.၄ ဘီလီယံခန့် ကြွယ်ဝနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းသည်။  အက်ခနို့သည် ဤလုပ်ငန်းကို ဖခင်ထံမှ အမွေဆက်ခံရခြင်း ဖြစ်၏။ ၂၀၂၀ ပြည့်တွင် ဖော်ဘီက အက်ခနို့တွင် အာဖရိက၏ အချမ်းသာဆုံး သန်းကြွယ်သူဌေးများစာရင်း၌ အဆင့် (၁၂) တွင် ထားသည်။ 
၂၀၀၃-၂၀၀၇ ကာလတွင် ဆုမက်ဆာ့ဒရာ (Souss-Massa-Drâa) ၏ ဒေသကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် လုပ်သည်။ ထိုစဉ်က လွတ်လပ်သူတို့၏ပြည်လုံးကျွတ်ထောက်ခံမှုပါတီ (National Rally of Independents) တွင် ပါတီဝင် ဖြစ်၏။ နောက် ၂၀၂၁ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်တွင် နှုတ်ထွက်သည်။ 
လွတ်လပ်ရေးပါတီ (Independence Party) မှ ဝန်ကြီးများ နှုတ်ထွက်ကြသည်နောက် ၂၀၁၃ ခု၊ ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်တွင် (၁၄) ယောက်မြောက် မိုဟာမက်ဘုရင်က အက်ခနို့ကို ကြားဖြတ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်ရာ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်ထိ လုပ်ရသည်။
၂၀၁၆ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်တွင် မိခင်ပါတီသို့ ပြန်ဝင်ပြီးနောက် ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို လက်ခံရသည်။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဆလာဟာဒင် မဇွာ (Salaheddine Mezouar) က အရာမှ နှုတ်ထွက်သောကြောင့်တည်း။ 
၂၀၂၁ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်နေရာ ၃၉၅ အတွက် ၁၀၂ နေရာရကာ သူ့ပါတီက နိုင်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်တွင် ဘုရင် မိုဟာမက် (၁၄) က ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်၏။ အက်ခနို့အနေဖြင့် အစိုးရသစ်ဖွဲ့ကာ ဘုရင့်အမှုတော်ကို ပြေကုံအောင် ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ဆယ်လဝါ အီဒရစ်ဆီ (Salwa Idrissi) နှင့် လက်ထပ်ထားသည်။ အီဒရစ်ဆီသည်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီး ဈေးဝယ်စင်တာများ ပိုင်၏။
↑ "Parcours : Les success stories du souss". Archived from the original on 19 April 2010.
↑ "Le Roi Mohammed VI nomme Aziz Akhannouch chef du gouvernement". Medias24 (in French). 10 September 2021.
↑ Boum, Aomar; Park, Thomas K. (2016). Historical Dictionary of Morocco (3rd ed.). pp. 34–35. ISBN 9781442262966.
↑ "Aziz Akhannouch & family". Forbes. Archived from the original on 13 November 2013.
↑ "Africa's Richest Billionaires 2020". forbes.com.
↑ Saad-Alami, Youness (27 September 2011). "Agriculture solidaire: Le coup de pouce d'Akhannouch Entretien avec le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime". L'Economiste.
↑ "Morocco: Gov't Advocates Comparative Advantages Benefiting Agricultural Countries in International Markets". allafrica.com.9September 2011.
↑ "Aziz Akhannouch Elected President of RNI". moroccoworldnews.com.
↑ "Mohammed VI nomme Aziz Akhannouch Chef de gouvernement". Telquel (in French).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဇစ်_ဇက်ခနို့&oldid=687494" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။